Horjoogayaasha shabaab oo cabsi soo wajahday: Marka oo lagu arkay diyaarado joog hoose ku duulaya | http://kismaayodaily.com
Horjoogayaasha shabaab oo cabsi soo wajahday: Marka oo lagu arkay diyaarado joog hoose ku duulaya
Diyaarado Joog hoose ku duulaya ayaa saacadihii ugu dambeeyay lagu arkayay Magaalada Marka ee gobolka Shabeelaha hoose, taas oo cabsi iyo wel wel k u abuurtay Horjoogayaasha baxsadka ku ah deegaannada gobolkaasi.
Wararka aynu ka heleeyno magaalada Marka ayaa sheegaya in saacadihii ugu dambeeyay magaalada Marka lagu arkayay diyaarado dagaal oo joog hoose ku socda kuwaas oo baqdin weyn ku abuuray horjoogayaasha shabaabka ee ku sugan gobolkaasi.
Sidooo kale xilliga habeebki ah ayaa la sheegay in la maqlayo guuxa diyaarado aan marnaba ka dul tageyn magaalada Marka iyo nawaarixeeda taas oo ku kaliftay horjoogayaasha shabaab in ay marba dhan u cararaan oo habeenkii aysan ku sugnaan Karin hal meel oo kaliya.
Arintani ayaa imaaneysa xilli ciidamada dowladda iyo kuwa Amisom ay ka holwgelayaan Gobolkaasi, iyo dowaldda Mareykanka oo malaayiin doolar ku baadigoobeysa 7 horjooge oo ka tiesan Alqaaciddada Soomaaliya.
Kismaayodaily On June - 9 - 2012
Kismayo, Marka, Mogadisho, Somalia